China indasitiri yekugadzira chirimwa fekitori uye vagadziri | Zhenyuan
Maindasitiri chirimwa: zvinoreva marudzi ese ezvivakwa anoshandiswa zvakananga kugadzirwa kana kutsigira kugadzirwa, kusanganisira makuru mashopu, zvivakwa zvekubatsira uye zvivakwa. Zvirimwa mumaindasitiri, zvekufambisa, zvekutengeserana, kuvaka, kutsvagisa kwesainzi, zvikoro uye mamwe mauniti anofanirwa kuverengerwa. kumashopu anoshandiswa kugadzira, maindasitiri emichero anosanganisirawo zvivakwa zvavo zvekuwedzera.
Maindasitiri musangano anogona kukamurwa kuita imwechete-inovakwa maindasitiri chivakwa uye yakawanda-storey maindasitiri chivakwa zvinoenderana neayo chivakwa chimiro mhando.
Ruzhinji rwezvivakwa zvemaindasitiri ane dzimba zhinji anowanikwa mune akareruka maindasitiri, zvemagetsi, zvishandiso, kutaurirana, mushonga uye mamwe maindasitiri. Iyi fekitori yepasi kazhinji haina kunyanya kukwirira, uye maratidziro ayo ekuvhenekera akafanana neakajairika esainzi ekutsvagisa zvivakwa zvemarabhoritari, uye mazhinji acho anotora fluorescent marambi emwenje marongero. maindasitiri zvivakwa, uye zvinoenderana nezvido zvekugadzira, mazhinji acho akawanda-akapamhama-imwe-nhurikidzwa yemabhizimusi emiti, ndiko kuti, akawanda-mapfupa emiti akarongedzwa mukufanana padivi peumwe. Chikamu chimwe nechimwe chinogona kufanana kana kusiyana sezvinodiwa.
Iyo upamhi (hupamhi), kureba uye kukwirira kweye-imwe-dura fekitori chivakwa zvakatemerwa zvinoenderana nehunyanzvi hwehukama pahwaro hwekusangana nezvimwe zvekuvaka modulus zvinoda Iyo span yemuti B: Kazhinji 6, 9, 12, 15, 18, 21 , 24, 27, 30, 36m ....... Kureba kwemusangano L: kanokwana makumi emamita, mazana emamita. Kukwirira kwemuti H: wakaderera kazhinji kacho uri 5 ~ 6m, uye iyo yepamusoro inogona kusvika 30 ~ 40m, kana kutokwira. Iyo span uye kukwirira kwemusangano ndizvo zvinhu zvikuru zvinofungidzirwa mukugadzirwa kwemwenje wewekishopu. Pamusoro pezvo, zvinoenderana nekuenderera kwekugadzirwa kwemaindasitiri uye zvinodiwa zvechigadzirwa kutakura pakati zvikamu, akawanda maindasitiri zvirimwa zvakagadzirwa nemakirani, ayo anogona kusimudza mwenje kurema kwe3 ~ 5t uye makuru emazana ematani.
Iyo dhizaini dhizaini
Dhizaini yekushambadzira yemusangano weindasitiri inoenderana nechimiro chewekishopu, uye dhizaini yemusangano ndiyo inosarudza chimiro chewekishopu zvinoenderana nezvinodiwa zvetekinoroji uye mamiriro ekugadzira.
Standard chirimwa dhizaini dhizaini
1. Dhizaini yezvirimwa zvemaindasitiri inofanirwa kuitwa zvichiteerana nemitemo inokodzera uye nhungamiro yeHurumende, kuve nehunyanzvi hwetekinoroji, hupfumi, zvine hungwaru, zvinoshanda zvakachengeteka, kuona hunhu, uye kuenderana nezvinodiwa kuchengetedza simba uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza.
2. Iyi tsananguro inoshanda kune dhizaini yechangobva kuvakwa, kuvakwazve kana kuwedzerwa michero yemumaindasitiri, asi kwete kuimba yekuchenesa yakachena ine mabhakitiriya sechinhu chinodzora. Zvipiwa zveMutemo uyu zvine chekuita nekudzivirira moto, kupukunyuka uye nzvimbo dzekudzimisa moto hazvishande kune dhizaini yekukwira-kumusoro kwemaindasitiri emiti uye epasi pevhu maindasitiri emiti ane hurefu hwechivakwa hunopfuura makumi maviri nemana emamita.
Chinyorwa 3 kana chivakwa chekutanga chikashandiswa pakuchenesa tekinoroji yakachena, dhizaini yemusangano weindasitiri inofanirwa kunge ichienderana nezvinodiwa mukugadzirwa, gadziridza matanho zvinoenderana nemamiriro emuno, bata zvakasiyana, uye shandisa zvizere zvivakwa zvehunyanzvi zviripo.
Dhizaini yemasangano emaindasitiri ichagadzira mamiriro anodikanwa ekuvaka, kuisa, kugadzirisa, manejimendi, kuyedza uye kushanda kwakachengeteka.
Dhizaini yemafekitori chirimwa inoenderana nezvakakodzera zvinodiwa zveyazvino nyika zviyero uye marongero mukuwedzera mukuitwa kwekodhi iyi.
Zvitanhatu, chirimwa chemaindasitiri chinoumbwa nechivakwa chakazvimiririra (musangano), uye chivakwa chakazvimiririra (dzimba dzekugara), chinhambwe pakati pezvivakwa zviviri iri 10 metres, padyo kwete pasi pemamita mashanu, kuitira kubvisa kugamuchirwa kwevanokwanisa Iyo reshiyo yenzvimbo yepasi kusvika pasi pechivako ndi1: 3.
Maindasitiri Ekugadzira Chidimbu Chikamu
Factory kuvaka kukwirira
Crane danda chirongwa
Pakazara 3D modhi dhizaini yesimbi mamiriro
Roof mamiriro dhizaini
Simbi furemu kukwirira Kudhirowa 1
Simbi furemu kukwirira Kudhirowa 2
Dhirowa yakasimba yesimbi yesimbi
Pashure: Villa Dhizaini
Zvadaro: Human Resources Uye Dhizaini Dhizaini
Maindasitiri Simbi Sisitimu Dhizaini